Levitation amin'ny sary: ​​Ny tsiambaratelon'ny fiara-motika | Famoronana an-tserasera
Tamin'ny fotoana voalohany nahitako sary nalaina sary miaraka amina endrika feno, dia variana aho, nibanjina ilay sary nandritra ny 15 minitra talanjona tanteraka. Tsy azony an-tsaina ny fomba nakana ilay sary. Nahasarika ahy ny tantara notantarainy tamiko nandritra izany fotoana izany. Zavatra tsy azo antoka, majika ary mametraka. Rehefa nandeha ny fotoana, nitombo ny fahalianako tamin'ny tontolon'ny sary ary hitako ny tsiambaratelo nafenin'ny matihanina mpaka sary lehibe. Hitako fa na dia tsy majika aza izy io, ny fandikana ny sary sy ny fanatanterahana dia mety ho sarotra sy be pitsiny, saika asan'ny mpanao majia sary. Misaotra ireo mpaka sary nahay ny teknika nampiasaina tamin'ny levitation, azonay izao ny mahatakatra ny tsiambaratelon'ireo firaketana ireo ary tsy misy fako.
Mieritreritra isika rehetra fa ny majika sary dia toa majika, nefa toa tsy majika, majika tokoa izy ireo. Satria ny mazika dia izay rehetra manohitra ny tsy azo atao ary izany indrindra no ataon'ny fakantsary levitation, manohitra ny zavatra voajanahary izy ireo. Ireo karazan-kira ireo dia efa nisy hatry ny ela, ary efa natao erak'izao tontolo izao nefa isaky ny mijery izany aho, dia tsy afaka ny hifantoka amin'izy ireo ny masontsika. Fa tsy mahagaga izany fa ny sasany amin'ireo sary dia namboarina tsara ka sarotra ny mahatakatra ny "tsiambaratelo" ao ambadik'izy ireo ary izany no antony mahavariana azy ireo angamba; mamorona te hahafanta-javatra, toy ny ankamantatra, saika sahala amin'ny fanamby atolotray anay amin'ny lovia nofonosina taratasy famonosana tsara tarehy.
Iray amin'ireo toetra mampiavaka azy matetika io karazana fitambarana io dia ny azy fahatsorana. Ny foto-kevitra mitsingevana zavatra dia mahery vaika ka mijoro irery ary tsy mila singa firafitra vitsivitsy. Miaraka amina zavatra mitsingevana, afaka miasa amin'ny endrika minimalist miaraka amin'ny fiadanam-po tanteraka isika. Rey Vo Lution, mpaka sary levona efa za-draharaha, dia nilaza fa tsy ho tsotra fotsiny ny fananganana azy, fa koa tsy maintsy izany. Manome lanja lehibe azy io.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny fanodinana aorian'izay dia mitana andraikitra lehibe amin'ny sary levitation ary tsy azo atao ny mahazo valiny farany raha tsy misy Adobe Photoshop na rindrambaiko mitovy amin'izany. Ankoatr'izay, ny sary farany dia azo inoana fa fitambarana vita amin'ny sary roa na maromaro. Tena ho zava-dehibe ho antsika ny fananana programa fanovana tsara hahafahantsika manao fampidirana tsara amin'ny famoronana.
Ny fomba roa hanatanterahana ireo firaketana ireo dia amin'ny alàlan'ny fampifangaroana sary roa samy hafa fiaviana (izay mety ho sarotra, indrindra ho an'ny zoro, firafitra ary jiro mba hampidirina tanteraka) na amin'ny alàlan'ny fampifangaroana sary roa nalaina mitovy toerana sy ny fametrahana, mametraka ny fakantsary amin'ny tripod. Amin'ny ankapobeny, amin'ny sary ambany (ilay apetrantsika eo amin'ny sosona ambany) dia matetika ny sehatra na ny efitrano resahina ary ilay ambony misy ny toetra amam-panontaniana mipetraka amin'ny toerana mety sy ireo singa mifatotra rehetra ilaina. Manaraka a saron-tava amin'ny sary eo ambony ary hanomboka hamoaka ireo singa mifatotra rehetra izay ilaintsika esorina mba hamoronana ny vokatra levitation.
Ho hitantsika fa tena zava-dehibe ny dingana famaritana eto. Ho an'ity dia tena ampirisihina mafy isika hihazona izany notepad sy pensilihazo ary andao hanao ny sary mety. Hanampy antsika hampivelatra ny hevitra amin'ny antsipiriany sy amin'ny antsipiriany kokoa izany. Brooke Shaden dia manoro hevitra antsika hanao an'io, io no fomba marina sy ara-teknika indrindra hamaritana ny firafitsika alohan'ny hifindrantsika amin'ilay hetsika.
Marina Gondra no milaza izany amintsika Ny fahasarotana amin'ny famerana dia miankina amin'ny toeran'ny toetrany. Indraindray mila manao fitsambikinana tsotra fotsiny ianao ary amin'ny fotoana hafa dia mila miseho amin'ny fihetsika hafahafa ny vatanao. Vokatr'izany, akanjo sy volo manana anjara toerana lehibe amin'ny sary izy ireo. Raha heverina fa mitsingevana ny toetra amam-panahy, dia toy izany koa ny akanjo sy ny volo.
Misy singa roa ilaina foana isaky ny singa levitation: Ny fiaviany sy ny toetrany. Ny saina dia tokony homena hatrany amin'ny halalin'ny saha. Ny fomba Brenizer dia afaka manampy antsika hamorona lalina lalina, izay hanome antsika zava-misy lehibe kokoa sy kalitao farany avo kokoa.
Etsy ankilany, ny zoro fitifirana dia tena manandanja, na dia raharaha iray aza ity. Ny zoro contrapicado mety ho tena maneho hevitra sy mandaitra. Izany dia hanome antsika ny fahatsapana fa ambony kokoa ny lohahevitra ary lavitra ny tany.
Raha vantany vao voasambotra ny background dia tsy maintsy alaina ny sarin'ilay lohahevitra. Ampirisihina ianao hiezaka ny haka ny sarin'ilay toetra amam-panaovana eo amin'ny toerana iray sy amin'ny fotoana iray ihany. Raha resaka famoronana tsy miankina dia miseho matetika ny tsy fitoviana. Ny jiro sy ny aloka dia iray amin'ireo zavatra voalohany tsy maintsy horesahintsika, noho izany dia ampirisihina mafy ny hanaovana ny fitifirana sary amin'ny toerana sy toerana iray ihany. Raha tsy azo atao izany dia tsy maintsy asiana jiro ao amin'ny postproduction, ary mety ho sarotra be izany.
Ampahany iray tena manan-danja amin'ny sarintsika koa ny fakana ny vatan'ilay lohahevitra amin'ny toerana voajanahary. Raha mitsambikina na mandry ilay lohahevitra, fitenin'ny vatana tsy maintsy mifanojo amin'ny levitation. Ny mpaka sary Marina Gondra indraindray dia manao fanazaran-tena eo anoloan'ny fitaratra alohan'ny hakana sary azy.
Ampirisihina isika hiezaka ny hitifitra amin'ny hafainganam-pandehan'ny farafaharatsiny farafaharatsiny 1/200 na ambony. Raha tsy misy hazavana firy, ny ISO. Aza hadino fa miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ilay shutter haingana dia manjavozavo ny sary.
Ny iray amin'ireo zavatra mahaliana indrindra amin'ity karazana firafitra ity dia ny fiasa amin'ny famoronana sy ny teknikanay amin'ny ambaratonga hafa. Teknika, saina, ary ambonin'ny fahalalahana rehetra, dia tafakambana amin'ny mazika levita sy hery misintona amin'ny famoronana sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Levitation amin'ny sary: ​​Ny tsiambaratelon'ny montage
Tena mahaliana ilay lahatsoratra, saingy te-hahafantatra ny anaran'ireo mpanoratra ny sary aho.
Lahatsoratra mahafinaritra. Raha tsy miditra amin'ny lalina lalina ara-teknika izy dia afaka mampiseho ny fomba ahazoana am-pahombiazana ireo sary levitation ireo. Misaotra
Pedro Gandulias Osorio. dia hoy izy:
Noheveriko izany, satria misy Photoshop.
Valiny tamin'i Pedro Gandulias Osorio.